Let’s focus on reviving the economy: President Mnangagwa
The people of Zimbabwe turned up in their numbers at the National Heroes Acre to commemorate both fallen and living gallant sons and daughters who fought for the liberation of Zimbabwe we now enjoy.
Defence forces praised
President Mnangagwa, who is also the Commander-In-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, (ZDF) today, (14 August 2018), praised the uniformed forces for their sterling efforts in civil-military engagements at home and broad. The President was speaking at the National Sports Stadium in Harare to mark the 38th anniversary of the Zimbabwe Defense Forces.
War Heritage museums on the cards
President Emmerson Mnangagwa has said that Government is spearheading the programme of developing war Heritage Museums across the country. Speaking today at the 38th Zimbabwe National Heroes Day Celebrations, President Mangagwa said it is high time those museums are built across the country in memory of the gallant sons and daughters who died for the liberation of the country.
President Mnangagwa preaches peace after polls
Addressing a crowd of thousands of electric people at the National Heroes Acre in commemoration of gallant sons and daughters who fought in the liberation struggle, President Mnangagwa has urged political parties to thwart personal interests that threaten to disturb the peace which prevails in the country but to uphold peace and tranquility in pursuing national interests.
Misinformation, stage managed violence and sanctions
In February 2018, there was influx of whatsapp messages alleging that groups of criminals (mabhinya) were kidnapping and beheading people, especially in rural Zimbabwe.
MDC Alliance not much of an Alliance
Following MDC Alliance (MDC-A) leader Nelson Chamisa’s court application on Friday 10 August 2018, at the Constitutional Court, which led to the cancelation of President-elect Cde ED Mnangagwa’s inauguration, there has been a lot of talk and speculation about the issue, with some MDC Alliance members saying that Chamisa should accept the Presidential election result as pronounced by the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) and allow the country to move on and rebuild.
Security sector challenged to be on high alert
President Emmerson Mnangagwa has challenged the security sector to be on high alert in the wake of increasing national threats that have potential to cause turmoil in the country.
MDC files petition with Constitutional Court
Movement for Democratic Change (MDC) Alliance presidential candidate, Nelson Chamisa, has filed his papers with the Constitutional Court (Con-Court) challenging the election result in which he lost to Zanu-PF leader, Emmerson Mnangagwa.
Zimbabweans strongly condemn sanctions
Zimbabweans from all walks of life have strongly condemned the continuous imposition of sanctions on their country by USA in union with MDC alliance.
Zimbabweans castigate Biti’s actions
Zimbabweans from all walks of life have roundly condemned the MDC Alliance partner, Tendai Biti for announcing the alliance leader, Nelson Chamisa as the 2018 Presidential winner in contravention of the law, inciting post-poll violence and playing victim by attempting to illegally flee to Zambia on Wednesday.